पाठकको पुर्पूरो : वि.सं. २०७६ मंसिर २७ गते, शुक्रबार – Rastriya Yuvajagaran News
२७ मंसिर २०७६, शुक्रबार ०३:२१078
वि.सं. २०७६ मंसिर २७ गते, शुक्रबार (२०१९ डिसेम्बर १३, पाैषकृष्णपक्ष प्रतिपदा)
मेषकृषि, बन्दव्यापार एवं उद्योगधन्दामा गरेको लगानिले दिगो रुपमा लाभ लिन सकिनेछ । सुखसुविस्ताका साधनहरु जुट्नेछन् । हर्षको खबर मिल्नेछ । पराक्रम बढेर जानेछ । साथीभाईको सहयोगले कार्य बन्नेछ ।
बृषस्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ । आफन्तजनहरु टाढिनेछ । विना तयारी कार्य गर्दा अन्योलता रहनेछ । कठोर बोलिका कारण कार्य विग्रनेछ । दोधारेपनले निर्णय लिन गाह्रो पर्नेछ, कुटुम्बको सल्लाहमा अघि बढ्दा सफल भइनेछ ।
मिथुनविशिष्ट समारोहमा अतिथिको सत्कार पाइनेछ । सहनशिलता र कृयाशिलताको बृद्धि विकास हुनेछ । मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउने समय रहेको छ । अघिदेखिका समस्या हल भएर जानेछन् । नयाँ संझौता हुनेछ ।
कर्कटखर्चको मात्रा ज्यादा हुँदा आर्थिक तालमेल मिलाउन गाह्रो पर्नेछ । टाढाको यात्रा कष्टकर रहनेछ । प्रतिक्षित नतिजामा गिरावट आउनेछ । सोचे अनुरुप कार्य नबन्दा दिक्क लाग्नेछ । दैनिक कार्यमा व्यस्थ रहनु होला ।
सिंहसामान्य मिहिनेतले नै लक्ष्यमा पुग्न सफल भइनेछ । मानसिक क्षमताको विकास हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा नवीन संभावनाहरु देखा पर्नेछन् । सृजनात्मक कार्यमा मन रमाउनेछ । आकस्मिक लाभको योग बनेको छ ।
कन्याकाम प्रतिको लगनशिलता बढेर जानेछ । काम गरेर विश्वास दिलाउन सक्दा नयाँ जिम्मेवारी थपिनेछ । अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ । शुभ समाचार सुन्न पाइएला । मान्यजनसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ । वहान सुख मिल्नेछ ।
तुलामान्यजनसँग वैरभाव उत्पन्न हुनेछ । नोकरीमा अपजस व्यहोर्नु परेता पनि व्यवसायबाट सन्तोष मिल्नेछ । धार्मिक आस्था बढ्नेछ । स्वास्थ्य अवस्थामा केही सुधार हुनेछ । सकारात्मक सोच विचार आउनेछ ।
वृश्चिकअनावश्यक कार्यमा भुल्दा गर्नैपर्ने कार्य भने ओझेलमा पर्नेछ । मन भित्र शंका उपशंका उब्जनेछ । कठोर बोलिका कारण विवाद पर्नेछ । परिश्रमको उचित मूल्यांकन नमिल्दा काम गर्ने हौसला घटेर जानेछ ।
धनुपारिवारिक सहयोगले कार्य बन्नेछन् । श्रममार्गबाट समेत सोचे अनुरुप लाभ मिल्दा खुसी लाग्नेछ । दाम्पत्य सहयोग पाइनेछ । प्रेमीप्रेमीका बिचको सम्बन्ध प्रगाढ रहला । शैक्षिक क्षेत्रमा उन्नति, प्रगति हुनेछ ।
मकरविपक्षीले बाधा व्यवधान ल्याउन खोजेता पनि अडिक भएर लाग्दा जित तपाईँको नै हुनेछ । आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा लगानिको वातावरण बन्नेछ । धनसञ्चयको वातावरण बन्नेछ । आफन्तजनको साथ पाइनेछ ।
कुम्भपारिवारिक समस्या हल भएर जानेछ । समस्याको पहिचान गर्न सक्दा काम गर्ने वातावरण बन्नेछ । प्रतिस्पर्धात्मक काम कार्यमा विजयी भइनेछ । स्वास्थ्यमा केही सुधार हुनेछ । अध्यनमा भने अल्लि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
मीनशारीरिक कमजोरीले गर्दा दैनिक काम कार्यमा समेत अबरोध आउनेछ । अनावश्यक कार्यमा समय वित्नेछ । जिम्मा लिएका कार्यलाई समयमै पूर्ण गर्न नसक्दा भनाई खानु पर्नेछ । वैदेशिक क्षेत्रका कार्य भने बन्नेछन् ।
Related tags : Horoscope-2076 Munshir 27